Nyowani yeHawaii Tourism Vision ndeyeKuzviuraya Kwehupfumi, asi kwete pono ku "kutaura kunhuwa"
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » New Hawaii Tourism Vision ndeyeKuzviuraya Kwehupfumi, asi kwete pono ku "hurukuro kunhuwa"
Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • wedzero • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
New Hawaii Tourism Vision ndeyeKuzviuraya Kwehupfumi, asi kwete pono ku "hurukuro kunhuwa"
Kanganwa iyo COVID-19 dambudziko, rekodha COVID kufa uye huwandu muHawaii. Kanganwa vashanyi vanosvika avo vakapfuura mavhiki maviri apfuura uye vadzoka pamabvi ikozvino.
Iyo hurukuro yakakosha yeHawaii Tourism Authority ndeye nzira yekuodza moyo kufamba uye kurota nzira yehupenyu yeHawaii iyo yanga isina kugadzikana kwemakumi emakore. Kune here kufa kwekuda kwekushanya mu Aloha Nyika?
Nepo Tourism Boards mumatunhu mazhinji muUnited States nepasi rose vachishuva kuwana nzira yekutambira vamwe vashanyi, kuchengetedza indasitiri, iyo Hawaii Tourism Authority inoita kunge iri kufunga nezvenzira dzekuodza moyo chikamu ichi.
Zvinogona kunge zvisingaite senge Hawaii Tourism Authority is iyo State agency yakapihwa mari nevateresi veHawaii uye vanoona nezve hutano nekusimudzira kweHawaii yekufambisa neyekushanya indasitiri.
Tourism ndiyo indasitiri hombe muHawaii. Vazhinji vevanhu 1.6 miriyoni vanogara mu50th US State vanovimba zvakananga kana zvisina kunangana paindasitiri yemushanyi.
Kubva munaGunyana 9, 2020, kutaurirana kwese kwakamira paHTA. Musi waSeptember 9 ndiro raive zuva VaJohn de Fries vakave CEO weHawaii Tourism Authority.
Kubva munaGunyana 9, 2020, pakange pasina nhungamiro, pasina zvirevo zvine chekuita neCOVID nekushanya. Mamirioni mumari dzevateresi, HTA yakakundikana kutora muridzi wedambudziko vakamirira Nyika yeHawaii nevanhu vayo.
Nhare kuHTA yanga ichirira kubvira munaKurume 2020, pasina wekutaura naye. Chinyorwa ichi hachina kukwanisa kutaura naVa de Fries.
Mr. de Fries havana kana kamwe vakapinda muchiitiko chevatori venhau, vakataura chero zvirevo zvingadai zvakabatsira nekukurudzira vashanyi, kunze kwekuburitsa huwandu uye nekuzivisa kuti vashaise moyo vashanyi.
HTA yakashandurwa ikava ichi chinhambwe chemasangano uko vanhu vanorota nezveHawaiian tsika, amai venyika, uye kurwira pamusoro-kutashanya dzimwe nguva pasina kushanya.
Kukurukura nyaya dzezvakatipoteredza, kupfuura-kushanya, chizvarwa cheHawaii, uye kushanya kwetsika inyaya dzakakosha nguva nguva. Zvichida HTA inogona kunge isina kucherechedza. Tiri kufamba nechikepe panguva yekukurumidzira zvakanyanya indasitiri yekufambisa neyekushanya yakambosangana nayo.
eTurboNews yakasvika kune vanobatana muHawaii, kusanganisira mapoka ehotera, maresitorendi, mashopu. Makomendi, kana paine angangove asiri kurekodhi. Hapana akada kutaura chinhu. Usataure kunhuwa!
Mufi Hannemann parizvino ndiye Pmugari & CEO we iyo Hawaii Kugara uye Yekushanya Association. Akashanda saiye meya wegumi nemaviri weGuta & County yeHonolulu, iyo yegumi nematatu masuwa makuru muUnited States. Mr. Hannemann havana kuzombodzosera mafoni, maemail kana midhiya enhau kubva kubvira COVID-12 yatanga
Iyi ndiyo nzira yeHawaii!
IHawaii Tourism Authority yanga yakabatikana uye yaita budiriro huru mu Malama Kuu Kumba kutaura.
Izvi ndizvo zvinotaurwa naVa de Fries nezve Malam Kuu:
Yakadudzirwa, "kuchengeta imba yangu inodikanwa" ndiko kusimbiswa kweiyo visceral kwandiri pachangu; nepo ichibvuma kugona kwekuti vanhu vanzwe kudzika midzi uye nekukonzeresa kwavanobva kana nzvimbo dzavanogara nekufona kumusha.
Beset parizvino nedambudziko repasi rose uye kudonha kwehupfumi, Hawai'i anotarisana nezviuru zvezvinetso zvinotyisa - pakati pazvo, kuvhurwa kwemaindasitiri edu ezvekushanya, panguva iyo kushushikana kukuru uye kuri kukura kunogona kunzwika munharaunda medu uye munharaunda medu.
Kupenya kwetariro, zvisinei, kunowanikwa mukusimba uye kugona kwevatungamiriri veHawaii mumapazi eruzhinji neakazvimirira; uye neruremekedzo ndinocherekedza vanatete, babamunini, vabereki, kūpuna, vechidiki, varairidzi, vadzidzisi, vafundisi, nezvimwe - vari kumitsara yekumberi zuva nezuva kutsvaga mhinduro dzekukurumidza nepakati, dzemhuri dzavo, vavakidzani, zvikoro, machechi, mabhizinesi madiki, asiri-purofiti, uye makambani. Chaizvoizvo, zviito zvakazvimiririra izvo zviri kuitika mazuva ese kubva kuPolihale, Kaua'i kuenda Kumukahi Point paHawai'i Island zvese zvinomiririra mweya nehunhu hweMālama Ku'u Kumba - nekuti zvisinei nemadzinza edu, hwaro hwekutanga we "kuchengeta imba yangu yandinoda" wakadzikwa. mune kwedu pachedu kuve uye pamwe chete DNA.
Nzira yaHawai'i yekuvandudza hupfumi pamwe nekusimudzira hupenyu hweveruzhinji zvinoda zvisati zvamboonekwa matanho, tarisiro, kubatana, kubatana, uye hutungamiriri hwehutongi hwakabatana mumatunhu ese.
Nehurombo, iyi hurukuro yakakosha, yakapihwa zvakanaka zvidzidzo, mavhidhiyo mapfupi, uye mharidzo hazvigadzirise dambudziko reECVID-19 rekushanyirwa kwenyika. Kugara zvakanaka kwevagari, kusanganisira vanhu vazhinji vasina pekugara, nyaya dzekugara zvakanaka, uye vamwe vanovimba nemari inogadzirwa neyekufambisa neyekushanya indasitiri.
Hawaii Tourism Authority Inozivisa Kudzokazve kwaKukulu Ola uye Aloha Aina Zvirongwa 15 September 2021
Hawaii Tourism Authority (HTA) yakazivisa kuti iri kutangazve Kukulu Ola uye Aloha Aina zvirongwa uye kutsvaga zvirevo kubva munharaunda. HTA yakaburitsa mbiri Chikumbiro cheZvirevo (RFPs) kuti ipe rutsigiro rwemari kumasangano asingabatsiri uye mapurogiramu anozopfuudzira tsika yeHawaii nekuchengetedza zviwanikwa muna 2022.
HTA Inoburitsa Yemunharaunda-Yakavakirwa Tourism Management Chirongwa cheOahu, 31 Nyamavhuvhu 2021
IHawaii Tourism Authority (HTA) yakaburitsa iyo 2021-2024 Oahu Destination Management Action Plan (DMAP), gwara rekuvakazve, kutsanangura patsva uye kumisazve iko kwekushanya kuOahu. Urongwa hwenharaunda-chikamu chikamu chebasa reHTA rakanangana neMamalama Kuu Imba (kuchengeta imba yangu inodikanwa) uye nekukurumidza kwayo kuedza kuri kuita kutashanya nenzira yekuvandudza.
Gavhuna weHawaii David Ige Anokurudzira Vagari, Vashanyi Kudzora Kusakosha-Kufamba
Gavhuna David Ige nhasi adaidzira vagari vemuHawaii nevashanyi kuti vanonoke kufamba kwese kusiri-kukosha kusvika pakupera kwaGumiguru 2021 nekuda kwechimbichimbi, chakakurumidza kuwanda mumatambudziko eCOVID-19 ayo ave kuremedza zvivakwa zvehutano nehupfumi hwenyika.
IHawaii Tourism Authority (HTA) yazivisa nhasi pivot yayo kuti ive inoshanda kwazvo manejimendi manejimendi manejimendi uye kukwidziridzwa kwevakuru vaviri vanozobatsira kutungamira zvirongwa zvakatsanangurwa muHTA's 2020-2025 Strategic Plan.
Hawaii Tourism Authority Inozivisa Kugadziriswazve Kuenda Kwenharaunda Management Inosanganisira maviri Ekusimudzira Ekumusoro Chikunguru 26, 2021
HTA yakanyatsogadzirisa mamiriro ayo uye mashandiro ayo kutsigira chinangwa che Malama Kuu Kumba (kuchengeta imba yangu inodikanwa) kuburikidza nemitemo yekuvandudza kushanya. HTA yakazvipira kupa simba nharaunda kuti ive nenzwi rakakura mune ramangwana rekushanya, ichisimbisa kudzoreredza nharaunda, kuenderera tsika yeHawaii, kuziva tsika dzakasiyana dzeHawaii, uye kutsigira zviwanikwa zvine hupfumi.
Hawaii Tourism Authority Inotsigira Chirongwa Chekudzora Kushanya Kwevashanyi kuPololu Valley paHawaii Island, Chikunguru 9, 2021
Pololu Valley inzvimbo yakakura uye ine nhoroondo muNorth Kohala kuHawaii Island. Munguva pfupi yapfuura, kwave nekuwedzera nekukurumidza kwevashanyi kuPololu Lookout, Trail, uye kumahombekombe egungwa, uye pane chikonzero chiri kukura chekudzora zvinokanganisa munharaunda uye zviwanikwa uye zvetsika zviwanikwa.
Hawaii Tourism Authority iri Kushanda Kuderedza Kushanya Kwevashanyi paMugwagwa unoenda Hana, Chikunguru 8, 2021
- Mugwagwa unoyevedza unoenda kuHana, unozivikanwa zviri pamutemo seHana Highway, ndeimwe yenzvimbo dzepamusoro dzevashanyi kuMaui, izvo zvakakonzera kuzara kwemigwagwa kwakakonzerwa muchikamu nekupaka zvisiri pamutemo uye kuyambuka kwevasina kuchengetedzeka munzira. Kubatsira kurerutsa mamiriro ezvinhu kuvagari veHana, iyo Hawaii Tourism Authority (HTA) inoenderera mberi ichishanda neMaui County maofficial nemamwe masangano ehurumende, uye iri kukurudzira zvakare vashanyi kuti vapinde rwendo kubva kukambani inobvumidzwa yekushanya pane kutyaira vega kana kushanyira dzimwe nzvimbo paMaui.
Hawaii Tourism Authority Inotsigira Merrie Monarch Mutambo Broadcast uye Pop-Up Makeke, Chikunguru 1, 2021
- IHawaii Tourism Authority (HTA) inodada nekutsigira nhepfenyuro yeiyo 58th Gore Negore Merrie Monarch Mutambo uye Mwaka 3 we Pop-Up Makeke izvo zvichabuda panguva yemutambo. Iyi ndiyo gumi neimweth gore iro HTA yanga iri mutsigiri weMerrie Monarch Festival. Tsika yeHawaii ndeimwe yehome mbiru ina mairi 2020-2025 Strategic Chirongwa, iyo inoshandurwawo kuti ive Olelo Hawaii.
HTA Inoburitsa Mhedzisiro kubva muna 2021 Resident Sentiment Survey, Chikumi 24,201
Iyo Hawaii Tourism Authority (HTA) yakaburitsa mhedzisiro yeChirimo 2021 Resident Sentiment Survey panguva yayo yaJune Board of Directors musangano nhasi. Ongororo iyi yakaona kuti nepo vazhinji vari kunetsekana nekukura kwemaindasitiri evashanyi, ruzhinji rwevagari vemuHawaii vanotenda kuti kushanya kwakakosha nyaya dzine chekuita neindasitiri iyi.
Hawaii Tourism Authority Inotangisa Dzidzo Malama Hawaii Campaign, June 1, 2021
Hawaii irikukoka vafambi kuti vaone maHawaiian Islands padanho rakadzika nekusimbisa kukuru pakubatana netsika yedu, kudzosera kwairi kuenda nekuichengetera ramangwana, uku vachitevedza hutano hwakachengeteka. Ndiwo meseji kumashure kweanoteedzana emavhidhiyo anotyisa uye anodzidzisa ari kutambidzwa kuvashanyi vasati vasvika uye mushure mekunge vasvika muHawaii. Icho chikamu cheMalama Hawaii mushandirapamwe wekushambadzira, uyo uchangobva kutangwa kuburikidza nekudyidzana pakati peHawaii Tourism Authority (HTA) neHawaii Vashanyi uye Convention Bureau (HVCB).
Hawaii Tourism Authority Board Inosarudza George Kam Kuti Ashande Sachigaro, Kubvumbi 30,2021
IHawaii Tourism Authority (HTA) Board of Directors yakasarudza George Kam sachigaro wayo mutsva panguva yezuro pamwedzi musangano webhodhi. Aimbove mutevedzeri wasachigaro. Kam ndiye anoshanda munharaunda mutungamiri uye aimbove mukuru muindastiri indasitiri.
“Tiri munguva ye'huliau 'kana shanduko inoshandura. Ino ndiyo nguva yedu yekuwana mhinduro kune mufambi wepano anoenzanisira mikana yekushanya uye matambudziko ainopa munharaunda medu. Tourism inogona kuve chinongedzo chekuvandudza mhando yehupenyu hwevanhu vese veHawaii. Kuwana bharanzi ndiko kumucheto kwebanga, hupamhi hwebadza rechipiri uswa, ”akadaro Kam. "Ndinotarisira kushanda pamwe nenharaunda, vatungamiriri vedu vakasarudzwa, timu yeHTA uye bhodhi reHTA kuti tiwane chiyero ichi."
HTA Inopindura kuChirungu Chazvino cheHB862, Kubvumbi 9, 2021
John De Fries, purezidhendi uye CEO weHawaii Tourism Authority (HTA), vakaburitsa chirevo chinotevera vachipindura maHawaieti eSenate maKomiti paNzira uye Nzira uye Commerce uye Kudzivirirwa kweVatengi pakushandisa gumbo remaminetsi ekupedzisira uye kutsiva maneja kupasisa bhiri iyo zvinoshandura zvinoshamisa mashandiro anoita Hawai'i agency yekushanya achamirira nyika pamwe nekuedza kwayo kubatana nharaunda nekumisazve kutashanya nenzira yekuvandudza.
HTA Inoparidza Nharaunda-Yakavakirwa Tourism Management Chirongwa cheHawaii Island, Kubvumbi 1, 2021
IHawaii Tourism Authority (HTA) yakaburitsa iyo 2021-2023 Hawaii Island Destination Management Chirongwa Chirongwa (DMAP). Icho chikamu chehurongwa hwehunyanzvi hweHTA uye kuenderera mberi nekuedza kushanya mukushanya nenzira ine hunyanzvi uye inovandudza. Yakagadziriswa nevagari vemuHawai'i Island, uye mukubatana pamwe neRuwa rweHawaii neChitsuwa cheHawaii Vashanyi Bureau (IHVB). Iyo DMAP inoshanda segwara rekuvakazve, kutsanangura patsva uye kumisazve iko kwekushanya kuHawaii Island. Inotaridza nzvimbo dzekushaiwa pamwe nemhinduro dzekuwedzera hupenyu hwevagari nekuvandudza ruzivo rwevaenzi.
HTA Inoburitsa Yemunharaunda-Yakavakirwa Tourism Management Chirongwa cheMaui Nui, Kurume 4, 2021
IHawaii Tourism Authority (HTA) yakaburitsa iyo 2021-2023 Maui Nui Ekuona manejimendi Yekuita Chirongwa (DMAP). Icho chikamu chehurongwa hwehunyanzvi hweHTA uye kuenderera mberi kwekuedza kubata kushanya nenzira ine hunyanzvi uye inovandudza. Yakagadziriswa nevagari veMaui, Molokai neLanai, uye mukubatana neDunhu reMaui neMaui Vashanyi neConferensi Bureau (MVCB). Iyo DMAP inoshanda segwara rekuvakazve, kutsanangura patsva uye kumisazve iko kwekushanya pazvitsuwa zvitatu zvinoumba Maui Nui. Inotaridza nzvimbo dzekushaiwa pamwe nemhinduro dzekuvandudza hupenyu hwevagari nekuvandudza ruzivo rwevaenzi.
"Mbiri yose inoenda kuvanhu veLanai, Molokai naMaui vakazvipira kuita chirongwa cheDMAP uye vaida kutarisana nematambudziko akaoma, vanogamuchira maonero akasiyana, vanoongorora mazano matsva uye vanoona zvinokosheswa. Maitiro eDMAP anopa hurongwa hwekudyidzana mukati mevatori vechikamu vanokurudzirwa ku 'malama' - kuchengetedza, kuchengeta nekuchengetedza nzvimbo netsika dzavanokoshesa, "akadaro John De Fries, mutungamiri weHTA uye CEO
HTA Inoparidza Nharaunda-Yakavakirwa Tourism Management Chirongwa cheKauai, Kukadzi 5, 2021
IHawaii Tourism Authority (HTA) yakaburitsa iyo 2021-2023 Kauai Destination Management Chirongwa Chirongwa (DMAP). Icho chikamu chehurongwa hwehunyanzvi hweHTA uye kuenderera mberi nekuedza kushanya mukushanya nenzira ine hunyanzvi uye inovandudza. Yakagadziriswa nevagari veKauai, uye mukubatana neDunhu reKauai neKauai Visitors Bureau, iyo DMAP inoshanda segwara rekuvakazve, kutsanangura patsva uye kumisazve iko kutungamira kwekushanya kuGarden Island. Inotaridza nzvimbo dzekushaiwa pamwe nemhinduro dzekuwedzera hupenyu hwevagari nekuvandudza ruzivo rwevaenzi.
Iyo-nharaunda-yakavakirwa hurongwa inotarisa pazviito zvakakosha izvo nharaunda, indasitiri yevashanyi uye mamwe matunhu anoona achidikanwa pamusoro pemakore matatu emakore. Izvo zviito zvakarongedzwa nembiru ina dzinopindirana dzeHTA's Strategic Plan - Natural Natural, tsika yeHawaiian, Nharaunda uye Kushambadzira kweBrand: